नेपालीलाई भोकै मर्न दिईदैन- प्रधानमन्त्री ओली | Ekhabar Nepal
नेपालीलाई भोकै मर्न दिईदैन- प्रधानमन्त्री ओली
राजनीति जेठ १३ २०७५ ekhabarnepal
प्रम ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रदुषण नियन्त्रण गर्दै कर नतिर्नेलाई तह लगाउने घोषणा गरेका छन् ।प्रम ओलीले वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भने, ‘स्वच्छ हावा सास फेर्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गर्छौ ।’ साथै प्रम ओलीले पुननिर्माणका कामहरु र सडक फराकिलो पार्ने काम केही वर्षभित्र पूरा हुने बताए । सिलान्यास गरेर छोडेको रानीपोखरी उस्ताको उस्तै, दुई वर्षअघि मैले अभियान सुरु गरेको धरहरा दुई वर्षपछि आउँदा जस्ताको तस्तै रैछ ।
प्रम ओलीले भने, तीन वर्षमा नगर्नेलाई केही भनिएन । तीन महिनामा किन भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । धन्यवाद छ, त्यो विश्वासका लागि । ‘गर्छु भन्नेले किन गरेन भन्ने विश्वास त रैछ नि ।’ प्रम ओलीले भने ।
कर छल्ने, कर नतिर्ने, विभिन्न तरिकाबाट हत्कण्ठा अपनाएर अनुचित काम गरिन्छ, त्यसलाई अन्त्य गरिन्छ । कर्मचारी प्रशासन वा कुनै पनि सरकारी संयन्त्र, त्यसलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्ने र हामीले देश र जनताप्रति लिएको निष्ठाको सपथ, जनताको करबाट लिएको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा अनुसार जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक कर्तव्य परायण भएर काममा लाग्ने चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार हुँदैन ।
असमानताको अवस्था के छ ? सबै जनता खान पाउने अवस्थामा छन कि छैनन् । केही मानिसको आम्दानीबाट बढेको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा सामाजिक जीवन माथि उठ्यो भन्ने कुरा हुँदैन । गरिब भन्दा गरिब बर्गले आधारभूत आवश्यकता पूरा भयो कि भएन ? हामीले हेर्छौ । नेपाल जस्तो देशमा खान नपाएर कोही भोकै मर्दैन र मर्न दिईदैन, मैले यो कुरा यत्तिकै भनेको होइन, नेपालमा अहिले सरकार छ । चार सय जना झाडापखालाबाट बिरामी परेको भन्ने खवर आयो, हामी त्यहाँ लागि सकेका छौं । यो सरकार अल्मिलिँदैन । थाहा पायो कि लाग्यो ।
हामी अधिकार प्राप्तिको लडाईबाट समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढेका छौं । देशको सम्पूर्ण साधन, स्रोत सामथ्र्यलाई एकताबद्ध भएर विकासको बाटोमा लगाउँदछौ । यतिबेला हामी पछाडि छौं । हाम्रो मात्रै स्रोत साधनहरुले पर्याप्त नहुन सक्छ । हाम्रा छिमेकी तथा लगानीकर्ताहरुसँग मिलेर विकास र समृद्धिको काम गर्छौ । देशभित्रको पुँजि पनि परिचालन गर्ने र बाह्य लगानी समेत आकर्षण गरेर विकास अघि बढाउनेछौं । निजि, सहकारी र सामुदायिक सबै प्रकारको अंगहरुलाई परिचालन गरेर अघि बढ्नेछौं । प्रम ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै भने ।